Tababaraha Juventus ee Andrea Pirlo ayaa weerar ku qaaday xiddig kooxdiisa ah oo uu sheegay in qaab ciyaareedkii ay ka filayeen ay ka waayeen intii ay socotay ciyaartii ay ay xalay dirqiga kaga adkaadeen kooxda Ferencvaros.
Maxaa Man United iyo Liverpool
Juventus ayaa lagala hormaray gool, waxaase barbarrihiisa keenay Cristiano Ronaldo ka hor intii aanu xilli dambe goolka guusha u keenin Alvaro Morata oo beddel kusoo galay qaybtii dambe.
Ciyaartan ayuu Andrea Pirlo kusoo wada bilaabay Cristiano Ronaldo iyo Paulo Dybala iyadoo uu kaydka dhigay Morata oo ahaa laacibkii guulaha kusoo hoggaamiyey kulamadii hore ee Champions League.
Daqiiqaddii 62aad ayaa garoonka laga saaray Paulo Dybala, waxaana booskiisa yimid Morata oo ugu dambayntiina goolka guusha keenay.
Pirlo oo warbaahinta la hadlay ciyaarta kaddib ayaa Paulo Dybala ku sifeeyey ciyaartoy liitay oo aan la imanin wixii laga filayay, waxaanu yidhi: “Damacayagu wuxuu ahaa inaanu fikrado cusub ku bilowno, laakiin waxaanu ogeyn inay caqabado jiri doonaan oo aanay ciyaar sahlan noqon doonin, waxaanay noqotay inaanu ciyaarta eryano.
“Ciyaartoydayda ayaan wax badan ka filayay balse Ferencvaros ayaa nasoo culaysisay, waxaanu isku daynay inaanu kubadda u dhaqaajino xagga dambe horena si degdeg ah ugu socodsiino anagoo kala firdhinayna ciyaartoyda. Laakiin si caajis ah ayaanu u dhaqaaqaynay taas oo u fududaysay inay iska kaaya difaacaan.”
Pirlo waxa uu intaa ku daray in Arthur oo uga soo wareegay Barcelona iyo Dybala ay ciyaarta ku dhibaatoodeen, isla markaana ka hooseeyeen heerkii laga filayay, waxaanu yidhi: “Arthur madaxa ayaa weynaaday maanta, waxaanu xajinayay kubadda isagoo isku dayaya inuu hore u wado halkii ay ka ahayd inuu qaybiyo oo uu difaaca Ferencvaros kala firdhiyo. Waxay ahayd inuu ciyaarta ku furfuro xaalad hal-abuur ah, balse haddii kubaddu si caajis ah ku socoto, waxay u fududaynaysaa inay boosaskoodii ku noqdaan.”
Dybala oo uu ka hadlayayna waxa uu yidhi: “Dybala wax fiican muu samaynin. Dhaawac ayuu ahaa, waxaanu qaadanayey kiniino muddo usbuucyo ah, sidaa darteed wuxuu u baahan yahay waqti uu dib ugu helayo qaab ciyaareedkiisii.”